यी हुन् महिलाले सुधार्नु पर्ने ५ स्वाभाव ! – List Khabar
Home / समाचार / यी हुन् महिलाले सुधार्नु पर्ने ५ स्वाभाव !
यी हुन् महिलाले सुधार्नु पर्ने ५ स्वाभाव !
admin January 10, 2022 समाचार Leaveacomment 75 Views
राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने दुबैको जिबन नर्ग समान हुन्छ ।कतिपय मानिसहरुको स्वभाव यस्तो हुन्छ, जसले एक अर्काको जीवन नर्क बनाउँछ । हामीले महिलाहरुमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदैछौँ, त्येसो त पुरुषहरु चाही सबै राम्रा हुन्छन भन्ने होइनन् । पुरुषका कारण पनि सम्बन्धमा धेरै समस्या आउन सक्छन् । यहाँ स्त्रीहरुको ५ स्वभावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
४.कचकचे र रुञ्चे- सामान्य कुरामा पनि किचकिच गर्ने र रुञ्चे स्वभावका महिलाले पनि पुरुषको जीवनलाई नराम्रो असर पारिरहेका हुन्छन् ।
दिनहुँको गनगन कचकच र गुनासोले पुरुषको मनोबल गिर्दै जान्छ । यस प्रकारको स्वभाव भएका महिलाले पुरुषलाई हौसला दिनुको साटो उसको जीवनलाई निराश र कुण्ठाग्रस्त बनाउँछन् ।
Previous पुनः जवानी फर्काउन चाहनुहुन्छ ? यो बिशेष चिज सेवन गर्ने-गर्नुस् !
Next उपत्यकाका सिडियोहरु भन्छन्- ‘लकडाउन हुँदैन, हल्लाको पछि नलागौं’